Tank Zakuun - Fiara fitaterana an-tsambo any Citadel | WoW Guides
Nahita an'i Azeroth
Diving amin'ny alàlan'ny forum
Hetsika eo amin'ny fiaraha-monina
Ny fahatezeran'ny mpanjaka Lich
Matoky an'ireo mpanasitrana
Andraikitry ny lalao
Tank Zakuun - Tambo-fiara any Citadel
Luis Cervera | | Citile Hellfire, tanky
Miarahaba. Miverina ao Tanqueando en Ciudadela izahay. Amin'ity indray mitoraka ity aho dia hanome torohevitra sy paikady momba ny fomba tank Zakuun, iray amin'ireo lehiben'ny elatra ambony amin'ny Hellfire Citadel. Andao isika hitady azy.
1 Tank Zakuun - Mode Heroic
2 Tank Zakuun - Mythic Mode
Tank Zakuun - Mode Heroic
Ny ady atao amin'i Lord Vil Zakuun dia tena fahasimbana ara-batana ary ny fametrahana toerana no zava-dehibe indrindra. Ny laharam-pahamehantsika dia ny mitazona ireo fiara mifono vy 2, misoroka tsara ireo faritra ary mametraka tsara ny lehibeny.
Ny talenta tsara indrindra dia ireo izay manome hery antsika amin'ny fanalefahana ara-batana. Azo sorohina ny fahasimban'ny majika amin'ity fihaonana ity fa ny vatana kosa hitohy ary avo lenta rehefa mandroso ny ady.
Ny dinamika amin'ny fivoriana
Ny tanking Zakuun dia tsy dia saro-takarina fa tokony hitandrina tsara amin'ny antsipiriany ianao. Ity ady ity dia misy Dingana 3 samihafa. Ny dingana tsirairay dia ho henjana kokoa noho ny teo aloha ary hanova tanteraka ny fahasimbana naterina tamin'ny fiara mifono vy. Zakuun dia manana paikady samihafa handresena ilay fihaonana, amin'ity torolàlana ity dia mifantoka amin'ny iray izay be mpampiasa tamin'ny fiandohan'ny patch, na dia miaraka amina ekipa mihoatra aza dia misy ihany koa ireo izay mitovy ihany ankehitriny.
Hivoaka izy ireo mandritra ity fivoriana ity Fehezan-teny resona manodidina ny efitrano. Ireo fontsana ireo dia tsy maintsy rakofana mba tsy hipoitra Kristaly Fel. Na dia rakotra aza ny triatra rehetra 1 Vil Crystal no hivoaka foana, noho izany ny gang dia tsy maintsy alamina mba hivoahan'ny kristaly ratsy amin'ny toerana mety indrindra. ireo kristaly fel Izy ireo dia miatrika fahasimbana maivana amin'ny bemidina iray manontolo sy fahasimbana avo kokoa raha manakaiky azy ireo ianao. Rehefa mametaka fisamborana iray ny mpilalao dia mahazo ilay debuff Angovo miafina. Mandritra ny 1 minitra ity mpilalao ity dia tsy ho afaka handrakotra ny Fehezan-teny resona ary koa raha mahazo fahasimbana avy amin'ny Mifoha amin'ny fandringanana o Ring of Destruction hiteraka fipoahana manimba ny tarika iray manontolo (fahasimbana be dia be), noho izany dia ilaina ny manendry vondrona hanao relay.
Saingy tsy mijanona eo ilay zavatra. Tokony hialana amin'izany ny Mifoha amin'ny fandringanana namely ny mpilalao amin'ny fahefana , fa tokony hosakanana tsy hamely ihany koa Kristaly Fel satria raha izany no nitranga dia hipoaka koa izany ka hanimba ny tarika. Ho an'ity dinamika ity tena ilaina ny fametrahana ny toeran'ny lehibeny sy ny toeran'ny andian-jiolahy misoroka Mifoha amin'ny fandringanana manantona Kristaly Fel ary ireo mpilalao voakasik'izany fahefana.
Dingana 1 - Mitam-piadiana
Amin'ny fiandohan'ny ady dia hahita ny tenany i Zakuun mitam-piadiana. Raha mbola ao amin'ity fanjakana ity dia hanimba ny tanky lehibe fotsiny ny kapoka fotsy. Mandritra io dingana io dia hampiasa Zakuun Fanahy maloto, Cavitation, Voan'ny aretina y Fehezan-teny resona.
Araka ny efa noresahintsika teo aloha, ilaina ny manarona ny Fehezan-teny resona mamela 1 maimaimpoana amin'ny toerana mety indrindra. Raha be dia be ny mozika ao amin'ny tarika tarika misy antsika, dia tsy ho ilaina intsony ny hametahan'ny fiara mifono vy ny fisitahana resonant. Raha mifanohitra amin'izay no izy dia vitsy ny melees tsy maintsy mailo isika manampy amin'ny fandrakofana ireo izay mivoaka akaikin'i Zakuun.
Ny fifanakalozana tanky dia hitranga rehefa mampiasa Zakuun Fanahy maloto ambonin'ny tank lehibe. Rehefa mitranga izany dia hahazo ny debuff ilay tanky voadona Fanahy vaky de Mampitombo ny fahasimban'ny aloka alaina 50% mandritra ny 1 minitra 30 segondra. Halefa any amin'ny dingana hafa koa izany, ny Dingana Incorporea. Mampiasà CD General Mitigation na Magic Mitigation rehefa mahazo Fanahy maloto satria mahatratra 250.000 ny fahasimban'ny aloka.
Ao amin'ny dingana Incorporea dia tsy maintsy mitsoaka isika Peratra fandringanana y Mifoha amin'ny fandringanana izany dia hateraka amin'ny sehatra volomparasy ao amin'ny efitrano foana mandritra ny 15 segondra. Raha manana isika Angovo miafina mba hanampiana handrakotra ny fisaratsarahana rehetra dia tokony hitandrina tsara isika nanomboka teo raha misy peratra na fifohazana mahazo antsika, dia hahazo fahasimbana ny tarika iray manontolo. Ny onjan'ny Peratra fandringanana mitsambikina izy ireo amin'ny fitsambikinana azy ireo. Rehefa ny ratra Incorporeal lany (15 segondra) hiverina amin'ny dingana mahazatra isika. Zava-dehibe ny manasongadina fa rehefa miverina amin'ny dingana mahazatra hamela orb amin'ny dingana tsy mandeha isika izay hamoaka Rings of Destruction sy Làlan'ny fahaverezana manasarotra ny fitsoahana ny onja any amin'ny tanky manaraka izay hiditra satria hihamaro hatrany. Ankoatr'izay, rehefa miala amin'ity dingana ity isika dia hamoaka a Mifoha amin'ny fandringanana noho izay tsy maintsy ataontsika miala foana amin'ny toerana lavitra ny kristaly Fel. Ary koa rehefa mivoaka ny dingana tsy mandeha amin'ny vatana hofongorana ny fitsarana an-tendrony Angovo miafina (raha tratry ny fisidinan'ny vava resona isika).
Zakuun koa hampiasa Cavitation. Mialà ity fahaiza-manao ity Mifoha amin'ny fandringanana nanao mpikambana tsy an-kanavaka tao amin'ny andian-jiolahy (laharana iray foana). Noho izany Zakuun sy ny tarika dia tsy maintsy apetraka ka ny làlan'ny Cavitation tsy afaka mamely ho an'ny Kristaly Fel. Mba hanaovana izany dia hametraka an'i Zakuun sy ireo mpilalao laharam-pahamehana amin'ny kristaly fel isika na hametraka ireo mpilalao tsy misy fiatraikany amin'ny herin'ny latent ao amin'ilay làlambe mba "hihinanany" ireo lalan'ny fanimbana.
Rehefa lany izy ireo 90 segondra ny dingana 1 Zakuun dia hiova ho dingana 2, Disarmed.
Dingana 2 - Tsy mitondra fitaovam-piadiana
Rehefa miditra amin'ity dingana ity i Zakuun dia manipy ny fitaovam-piadiany amin'ny teboka iray ao amin'ny efitrano izy ary ny tarika iray manontolo handray fahasimbana mitohy avo hatrany. Mandritra io dingana io ihany koa, ny tanking Zakuun dia ho mafy kokoa noho ny Tanan-tanana. Amin'ity dingana ity dia hampiasa Zakuun Tanan-tanana y Voan'ny fandringanana.
Raha tadidinao ny fihaonana tamin'ny mpivaro-kena Ogropolis dia mitovy io dingana io. Ireo fiara mifono vy roa dia tsy maintsy miaraka hatramin'ny vokany Tanan-tanana avy any Zakuun dia miteraka fahasimbana namboarina tamin'ny tanky lehibe ka nalain'ny mpilalao akaiky indrindra ihany koa. Raha tsy misy mpilalao eo akaiky eo dia hitondra fahasimbana roa heny ny tanky lehibe. Noho izany dia tsy maintsy miara-miasa ny fiara mifono vy roa ary rojo vy CD mpiaro satria samy handray fahasimbana ara-batana izy ireo ankoatry ny fahasimban'ny afo maharitra Fipoahana mahery vaika (ny fahasimbana navoakan'ny fitaovam-piadian'i Zakuun). Ary raha tsy ampy izany dia hipoaka avy amin'ny fahasimbana ny mpilalao kisendrasendra Voan'ny fandringanana mamoaka Mifoha amin'ny fandringanana tsy maintsy miala na manalefaka isika mba tsy hahafaty antsika, fa tsy misaraka amin'ny naman'ny tanky.
Ity dingana ity dia maharitra 30 segondra. Aorian'izany dia hiverina amin'ny dingana 1 i Zakuun.
Dingana 3 - Tezitra
Rehefa nidina hatramin'ny 30% ny fahasalaman'i Zakuun hiditra amin'ity dingana ity izy mandra-pahafatiny. Ity dingana ity dia fifangaroan'ny dingana 1 sy 2 ary ho dingana sarotra indrindra amin'ny ady. Mandritra io dingana io dia hampiasa Zakuun Fehezan-teny resona, Voan'ny aretina, Cavitation, Fipoahana mahery vaika, Voan'ny fandringanana y Tena mitam-piadiana (toa Tanan-tanana).
Ireo fiara mifono vy roa dia tsy maintsy miaraka toy ny tamin'ny dingana 2 nanomboka Tena mitam-piadiana manao toy ny Tanan-tanana. Hampiasa CD fiarovana izahay mba hahavelomana ny fahasimbana lehibe ateraky ny fanafihana ara-batana an'i Zakuun sy ny fahasimban'ny afo Fipoahana mahery vaika. Tsy maintsy miala amin'nyMifoha amin'ny fandringanana halefan'ny mpilalao tratry ny Voan'ny aretina ary ho Voan'ny fandringanana. Ary hanampy izahay handrakotra ny sasany Fehezan-teny resona amin'ny melee.
Azo antoka fa rehefa miditra amin'ity dingana ity dia mbola misy tanky 1 voan'ny Fanahy vaky (ho an'ny fahaizana Fanahy maloto amin'ny dingana 1). Tena zava-dehibe ny fahazoana an'io tanky io fanalefahana mety rehetra ankoatry ny azy satria 50% ny fahasimban'ny aloka.
Raha fohy ity dingana ity dia ho faty i Zakuun ary hifoka rivotra ireo fiara mifono vy alohan'ny fihaonana manaraka. Raha hijery ny sisa amin'ny fahaiza-manao sy paikady ho an'ny DPS sy Healers dia manatona anay Torolàlana ankapobeny ho an'ny Zakuun Normal sy Heroic.
Zava-dehibe ny fametrahana ny toerany amin'ity tolona ity, na eo amin'ny toeran'ny Zakuun na amin'ny toeran'ny mpilalao sy mpanasitrana isan-karazany mba hiatrehana tsara ny fifanolanana sy ny kristaly fel. Misy fomba 2 tena mahomby amin'ny fametrahana an'i Zakuun. Amin'ity toro-lalana ity dia hanazava ny roa isika.
Ny fomba mahomby voalohany amin'ny fametrahana an'i Zakuun dia ny fametrahana azy akaikin'ny iray amin'ireo rindrin'ny efitrano, kokoa amin'ny zorony. Ny laharana dia ao amin'ny farany mifanohitra ary hataontsika mivoaka ireo kristaly fel ao Ny sisin'i Zakuun dia niraikitra tamin'ny rindrina. Amin'izao fomba izao Ny lalan'ny fandringanana Cavitation dia tsy hianjera amin'ny kristaly satria handalo eo anelanelan'ny kristaly izy ireo, ary ireo tratry ny voa voa, Infecto sy ny tanky miala ny dingana incoporea dia hapetraka ao ambadiky ny tarika (ny laharana) ary eo amin'ny zoron'ny efitrano hafa. Raha te-ho azo atao io fametrahana io dia tsy maintsy miandry ny fisehoan'ny triatra voalohany isika, hanafaka ilay akaiky indrindra amin'ny zoro ny tarika ary avy eo hitondra an'i Zakuun eo anilany isika. Manomboka amin'io fotoana io dia ho olana ny famoahana ny sisa amin'ny Kristiana Fel akaikin'ny kristaly voalohany. Hanendry mpilalao roa foana izahay (Mages, Pretra Shadow, ary Hunters) arovy ny kristaly amin'ny lalan'ny fandringanana mampiasa Evanescence, Deter Lawrence y pielezana. Izy ireo koa dia hiaro ny tarika Cavitation amin'ny fijoroana eo alohan'ilay vondrona.
Ny fomba hafa dia tsy dia sarotra loatra nefa mampidi-doza ihany koa. Ho hitantsika i Zakuun ao amin'ny ambaratonga max dps range sy mpitsabo (35-40 metatra). Hahatonga ny fel kristaly dia miseho ao ambadiky ny andian-jiolahy na akaiky. Ho toy ny rindrina ny laharana sy ny mpanasitrana manakana ny Cavitation sy ny sisa amin'ireo làlan'ny fandringanana tsy hamely ny kristaly Fel. Ireo voakasiky ny angovo miafina no hijanona ao ambadiky ny tarika tsy ho voadona, ary ny Hunters, Shadow Priest and Mages dia hanafina izany Deter Lawrence, pielezana y Evanescence lalan'ny fanimbana raha azo atao.
Ho hita eo hatrany ny fanatsarana hatrany ny fametrahana ny triatra resonant dia kisendrasendra ary ny paikady dia mahalana no hivoahana amin'ny fitenenana.
Rahoviana no hampiasa ilay peratra angano?
Araka ny efa hitantsika, ny fitondrana tanky Zakuun dia mitaky fikomiana ara-batana lehibe. Fotoana tsara ampiasaina Sanctus, Sigil an'ny Indomitable dia ho mandritra ny dingana 2 sy ny dingana 3 hampihenana ny fahasimbana be an'ny tanana mavesatra sy mitam-piadiana mahery vaika.
Tank Zakuun - Mythic Mode
Tanking Zakuun amin'ny fahasarotany angano dia tsy mitaky fanovana lehibe, fa ny vitsy misy dia misy dikany lehibe.
Ny fiovana mahery vaika indrindra dia ny fahavoazana Angovo miafina. Amin'ny fahasahiranana angano ity debuff ity tsy manam-potoana. Ireo voakasik'izany dia hanana an'io debuff io mandra-pidirany amin'ny dingana manokana tank, ny disembodied dingana.
Fanahy maloto hisy fiatraikany amin'ny mpilalao 5. Ny fahavoazana Fanahy vaky ny tanky lehibe ihany no handray azy fa Mpilalao 4 akaikin'ny tanky koa no hiditra amin'ny dingana tsy mandeha amin'ny vatana.
Rehefa mivoaka ny dingana tsy mandeha amin'ny vatana, ireo mpilalao voan'ny Angovo miafina ho very izany fahasimbana izany fa raha ny valiny dia hisy vokany eo aminy izany Fanahy reraka. Ity debuff vaovao ity dia manakana anao tsy handray ny triatra resonanta mandritra ny 2,50 minitra.
Satria isan'ny mpilalao (olona 20) raikitra izy hiseho foana 5 fehezan-teny resona.
Mandresy amin'ny fahombiazana hatolotra ny ady vondrona misy mpilalao 4 handrakotra ny fehezan-teny resona. Rehefa manarona azy ireo izy ireo ary voakasiky ny Angovo miafina ireto mpilalao 4 ireto dia hiditra ao anaty tank lehibe hoentina any amin'ny dingana fampidirana. Ao no misy ny mpilalao 4 sy ny tank lehibe mandosira mandritra ny 15 segondra ny onjan'i Mifoha amin'ny fandringanana y peratra fanimbana satria tena ilaina mba tsy hahazo simba na avy na iza na iza na ho faty anaty fipoahana ireo andian-jiolahy. Rehefa mivoaka ny dingana tsy mandeha amin'ny vatana isika dia hamoaka Mifoha amin'ny fandringanana Ka hiala amin'ny teboka samihafa amin'ny efitrano izahay manakana ny stelae tsy hahatratra ireo kristaly fanimbana. Vantany vao tafavoaka izahay ny fahasimbantsika Angovo miafina hanjavona mamela ny fanampiana hisakana Mifoha amin'ny fandringanana. Hanohitra izahay no handray Fanahy reraka izay hisakana antsika tsy hanampy amin'ny fandraisana ny triatra résonant, ka vondrona iray hafa misy mpilalao 4 sy ilay tanky hafa Handray an'io asa io izy ireo ary hiditra amin'ny dingana tsy hita intsony.
Ireo dingana dia hihazakazaka mitovy amin'ny maody Heroic. 90 segondra dingana 1, 30 segondra dingana 2 ary amin'ny dingana fahasalamana 30% 3. Hampiasainay ny paikady izay nohazavaina tamin'ny dingana 1 sy 3, tsy hisy triatra resonant hipoitra amin'ny dingana 2 ary tsy hampiasa i Zakuun Fanahy maloto. Tena zava-dehibe izany amin'ny dingana 1 dia tsy miara-mipetraka ireo fiara mifono vy so it Fanahy maloto tankina 1 fotsiny sy ireo mpilalao 4 voatendry rehetra no raisinao.
Ho avo kokoa ny fahasimbana noho izany amin'ny dingana 2 ny tanky dia tsy maintsy ampiasao izay rehetra anananay hanalefahana ary manontany mpanasitrana izay manohana anay amin'ny CD fanalefahana bebe kokoa. Hanampy amin'ny fandrakofana ny fisitahana resonant izahay raha ilaina ary hametraka tsara an'i Zakuun isika. Amin'ny angano dia manoro hevitra aho ny hampiasa ny paikady voalohany voalaza ao amin'ny fizarana Positioning mba hampihenana ny mety hipoahan'ny fipoahana tsy ilaina.
Ary farany dia mirary ny soa ho anao amin'ny alàlan'ny famonoana an'i Zakuun. Mandrapihaona amin'ny Tanqueando en Ciudadela manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » Bands » Warlords of Draenor » Citile Hellfire » Tank Zakuun - Tambo-fiara any Citadel
Valor Point Item Upgrade - Patch 6.2.3 PTR
Famintinana ny Inona no Vaovao ao amin'ny Patch 6.2.3 - Ho avy tsy ho ela amin'ny PTR
Raiso ny vaovao farany WoW ao amin'ny mailakao.